आज चैते दशैँ, नवदुर्गा भगवतीको पूजा गरी मनाइँदै — Sanchar Kendra
१कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न भकाभक किन पछि हट्दैछन काठमाडाैं उपत्यकाका ठुला अस्पताल ? यस्तो छ कारण
२फेरि गयो ५.८ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्पको धक्का, कहाँ हो केन्द्रबिन्दु ?
३कोरोनालाई जित्नुभयो ? अब अनिवार्य ध्यानमा राख्नुहोस् यी कुरा र भुलेर पनि कहिले नगर्नुहोस यी गल्ति
४घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
५नयाँ सरकार गठनका लागि बाबुराम भट्टराईले राखे यस्तो प्रस्ताव
६नेपालका अस्पतालमा सकियो अक्सिजन, शय्यामा छट्पटाउँदै बिरामी
७नर्सको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रपतिले गरिन् यस्तो ट्वीट, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
८आमाको मुख हेर्ने दिनमा सासुआमा सिता दाहालको फोटो राख्दै बिना मगरले किन लेखिन यस्तो स्टाटस, यस्तो छ कारण
९अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा जेठ १७ गतेसम्म प्रतिबन्ध
१०खोपमा पनि भ्रष्टाचार भएको समाचार बाहिरिएपछि स्वास्थ्यमन्त्रीले मुख खोले
११नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा नयाँ रेकर्ड, आज एकैदिन २२५ जनाको मृत्यु
१२काठमाडौंका सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय
काठमाडौं । आज चैते दशैँ । प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीका दिन मनाइने यस पर्वमा नवदुर्गा भगवतीको पूजा आराधना गरिन्छ । चैते दशैँ पर्वका अवसरमा आज हिन्दु धर्म मान्ने नेपालीले घर घरमा दुर्गा भगवतीको विशेष पूजाआजा गर्छन् ।
जाँदाजाँदै स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने सरकारको तयारी